China Silicone Rubber Cushion Yekadhi-inogadzira Laminator vagadziri uye vanotengesa | Cayce Chivabvu
Silicone rabha cushion yemakadhi-kugadzira laminator yakagadzirirwa uye kugadzirwa nekambani yedu yakazvipira kutsigira iyo yekugadzira makadhi indasitiri zvinoenderana nemusika kudiwa, yakakodzera kune ese marudzi emakadhi ebhangi, makadhi echikwereti uye smart kadhi kugadzirwa.
Iyo silicone yerubhu cushion inogadzirwa nekambani yedu inoshandisa marudzi maviri ehurongwa hwekuumbwa, iyo KXM4213, mativi maviri silicone rabha ine pateni, yepakati layer fiberglass machira. KXM4233, mativi maviri akanzwa, yepakati layer silicone rabha.
KXM4213 (Mativi ese ari maviri silicone rabha ine pateni, yepakati fiberglass jira)
Raw zvinhu zvakatengwa kubva kuGerman, yakanyanya tembiricha nemishonga, yakanaka kusimba
Kuchenesa kuitisa nekukurumidza, Pisai zvakaenzana zvakagoverwa
Yakanaka yakakwira yekumanikidza kushanya.
Solvent nemishonga, kuchembera nemishonga, ngura nemishonga.
KXM4233 (mativi ese akanzwa, yepakati silicone rabha)
Mbishi zvinhu zvinogona kupisa kupisa, kukwirira kumanikidza nemishonga.
Kunaka kwemvura kwakanaka, kunogona kubvisa bhabheri uye watermark yekadhi repamusoro.
Kubata kwakanaka, kurebesa hupenyu hwese hwekupisa bhodhi uye laminating board.
Chinhu KXM4213 KXM4233
Pamusoro zvinhu Silicone rabha ine pateni Kupisa kwekupisa kwakanzwa
Zvepakati zvinhu Mucheka we fiberglass Nhema silicone rabha
Kuoma kwemahombekombe A 55 ± 5 50 ± 5
Tensile simba (N / mm) 80 60
Kupisa kwekushisa ℃ 230 200
Ruvara chena chena
Hunhu hwayo ndeinotevera:
(Yakapetwa-mativi maitiro silicone yepakati girazi fiber jira)
• Chigadzirwa chinotora zvigadzirwa zveGerman zvinotengeswa kunze, kupisa kwakanyanya kupisa uye kugona kwakanaka.
• Kutsanya kupisa conduction uye yunifomu yekuparadzira kupisa inogona kuwedzera zvakanyanya kubuda kwechigadzirwa panguva yeiyo lamination maitiro.
• Ine yakanaka kumanikidza kuramba, hapana deformation, yakavimbika uye yakasimba.
• Inobatsira kubvisa makomba uye zviyo zvakanaka pamusoro uye nekuvandudza chigadzirwa chigadzirwa.
• Solvent kuramba, kukwegura kuramba, ngura kuramba, isina-chepfu uye isina kunhuwirira, zvinoenderana nezvinodzivirira zvezvakatipoteredza.
Zvigadzirwa zvechigadzirwa zvinogona kumira nekupisa kwakanyanya uye kumanikidza, kusangana nezvinodiwa zvetekinoroji yekugadzira makadhi uye kumisikidza, uye anoshandiswa zvakanyanya seakakosha kugadzira kadhi zvinoshandiswa.
• Inokurumidza uye yunifomu kupisa conduction, inatsiridza kugadzirwa kwekuita uye chengetedza simba.
• Ine yakanaka yekumwa mvura mashandiro, inogona kunyatso bvisa matubvu nema watermark pane pamusoro pekadhi, uye nekuvandudza zvakanyanya chiyero cheiyo chigadzirwa.
• Iine yakanaka yekukwirisa mashandiro, inodzivirira kukwenya kunokonzeresa nekubata kwakaomarara pakati peplate yekupisa uye laminate, uye kunowedzera hupenyu hwebasa hweplate yekupisa uye laminate.
• Nyore kushandisa, kuchengetedza inotsiviwa murume-maawa.
Pashure: Silicone Rubber Cushion YeHot Press Press
Zvadaro: Silicone Rubber Sheet Kune Solar Laminator